बियर र झिङ्गाको यस्तो छ साइनो ! – Everest Dainik – News from Nepal
बियर र झिङ्गाको यस्तो छ साइनो !
एजेन्सी । झिङ्गा भन्किएको कसलाई नै मन पर्ला र ? त्यसमा झन् मुड फ्रेस गर्न बियर पिउने विचार गर्नु भयो र बोतल खोल्नासाथ झिङ्गा भन्किनथाले भने कस्तो नरमाइलो लाग्छ ।
तर अक्सर बियरका पारखीहरूले भोगिराख्ने समस्या हो यो । आखिर कताबाट आउँछन् त यसरी भन्किने झिङ्गा ? हामीले स्काईन्युजमा प्रकाशित एउटा आलेखको नेपाली भाषान्तरण यहाँ राखेका छौं ।
पक्कै पनि झिङ्गा कसैले मन पराउँदैन तर पनि तिनी आउँछन् । त्यसमा पनि बियरको बोतल खोल्दा झिङ्गा आउनु त्यसरी नै सामान्य हो जसरी आइतबार पछि सोमवार ।
वैज्ञानिकहरूले बियर या वाइनको बोतल खोल्नासाथ झुल्किहाल्ने झिङ्गाहरूबारे रोचक तथ्य फेला पारेका छन् ।
क्यालिफोर्निया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा कार्यरत वैज्ञानिकहरूको एउटा टोलीले नेचर जर्नलमा प्रकाशित एउटा शोध आलेखमा यसको कारण खोत्क़लने प्रयास गरेका छन् ।
वैज्ञानिकहरूको उक्त टोलीले छ वर्षको अवधिमा हजारौं प्रयोगहरू गरे र नयाँ नतिजा सार्वजनिक गरे । झिङ्गाहरू यस्ता पेय पदार्थमा हुने कार्बनडाइअक्साइडका कारण विकर्षित हुन्छन् भन्ने मान्यता विपरित नतिजा प्राप्त भयो ।
यस शोधको नतिजा अनुसार यो नतिजा हालसम्म प्रचलित मान्यता विपरित रहेको छ, जस अनुसार बियर जस्ता पेय पदार्थमा हुने कार्बनडाइअक्साइडका कारण झिङ्गाहरू विकर्षित नभई आकर्षित हुने गर्दछन् ।
यस शोध परियोजनाको नेतृत्व गरिराखेका डाक्टर फ्लोरिस भान ब्रुगेलका अनुसार यस अध्ययनले फलमा झिङ्गाले कार्बनडाइअक्साइडप्रति देखाउने व्यवहार बारे आश्चर्यजनक नतिजा दिएको छ ।
यस शोधका क्रममा भएका प्रयोगहरूलाई राम्रै नियालिरहेका प्रोफेसर मिखायल डिकिन्सन भन्छन्, ” कीराहरूको व्यवहारबारे उपलब्ध वैज्ञानिक साहित्यले कार्बनडाइअक्साइडलाई सर्वव्यापी आकर्षणकर्ताको रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । तर फलमा लाग्ने झिङ्गाको हकमा भने वैज्ञानिकहरूले फरक दाबी गर्दै आइरहेका थिए । उपलब्ध स्रोतहरूमा झिङ्गाहरू कार्बनडाइअक्साइड मन नपराउने एक मात्र कीरा भएको र यसको प्रयोग झिङ्गा भगाउन समेत गर्न सकिने भनिदै आइरहेको थियो ।
तर अध्ययनका नतिजाहरूले भने फरक तथ्य फेला पारेका छन् । फलको झिङ्गाले फलमालाई गुलियो पार्ने विशेष प्रकारको ढुसी खाने गर्दछ । यस ढुसीले फर्मेंटेसन विधिबाट चिनी तयार पार्ने हुँदा झिङ्गाहरूले कार्बनडाइअक्साइडप्रति समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाउने शोधले भनेको छ ।
बियरमा फिँज उत्पन्न गराउने तत्व कार्बनडाइअक्साइड भएकाले बियर खोल्नासाथ वरपर रहेका झिङ्गा आकर्षित हुने शोध निर्देशक ब्रुगेलको भनाई छ ।
यसका साथै उनी भन्छन्, “जनावरहरू प्रति कीराहरू आकर्षित हुने कारण पनि उनीहरूले सास फेर्दा फाल्ने कार्बनडाइअक्साइड हो ।” उनीहरूको शरीरमा रहेका उत्प्रेरक अङ्गहरूले कार्बनडाइअक्साइडको उपस्थितिलाई खानासँग जोड्ने भएकाले जनावरहरू भएको ठाउँमा झिङ्गा लगायतका कीराहरू झुम्मिने गर्दछन् ।
ट्याग्स: beer, beer and fruit fly
महिला विश्व कपः अष्ट्रेलिया र भारतबीचको खेल शुरू
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी आदर्शबाट बिचलनतर्फ उन्मुख हुने संकेतः प्रचण्ड
शिक्षकलाई लिएर प्रधानध्यापक जुवाखालमा ! ८ जना पक्राउ
बाँस्कोटाले दिए महाशिवरात्रीको शुभकामना, व्यङ्ग्यको ओइरो
प्रेमिका खोजिदिनेलाई २८ लाख पुरस्कार !
कोरोना भाइरसः मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २२ सय नाघ्यो, ७५ हजार बढी सङ्क्रमित
भारतमा बन्धक बनाइएका दुई नेपाली दिदीबहिनीको उद्धार